Aro maka Kaadị Azụmaahịa? | Martech Zone
Aro maka Kaadị Azụmaahịa?
Tuesday, July 29, 2008 Fraịde, Jenụwarị 6, 2017 Douglas Karr
Mụ na nwa m nwoke na-ele American Psycho. Ọ bụ ihe nkiri na-enye nsogbu, mana kaadị azụmahịa bụ ọkacha mmasị m (Huey Lewis bụ a nso abụọ).
Enwere m kaadị azụmahịa dabere na blog nwa oge, mana ugbu a agbanweela aha ngalaba m, ọ ga-amasị m ịnweta ihe pụrụ iche.
Echiche ọ bụla? Onweghị ihe dị n'ọkpụkpụ, biko.
Tags: american psychoMmatakaadị azụmahịapaul allenazụmahịa azụmahịaala nke na-elekọta mmadụ ahịa
Don't maghị ihe ahịa bụ
Olee otú Melite a WordPress Omume Sidebar si iCal iji Google Kalinda (na ndị ọzọ na Google Fun!)
Jul 29, 2008 na 8:39 PM
Oh biko, ihe ọbụla ị mere, anaghị eji Vista Bipute ọzọ. Ka m gwa gị oge ọzọ, ma ị nwere ike ị nweta kaadị gị n'oge na-adịghị anya.
Aga m eche banyere ihe pụrụ iche maka imewe.
Jul 29, 2008 na 11:03 PM
M kwere nkwa, Michelle! M bouncing gburugburu ụfọdụ pụrụ iche echiche.
Jul 29, 2008 na 9:08 PM
Kaadị Metal Biz
Jul 30, 2008 na 4: 21 AM
Jul 30, 2008 na 9: 54 AM
Amaghị m ọtụtụ ihe gbasara kaadị azụmaahịa, mana ama m na American Psycho bụ nnukwu ihe nkiri. Karịsịa ma ọ bụrụ na i nwere ike bulie niile ọchịchịrị, aghụghọ ọchị. Ahụrụ m ya n'anya. Otu n'ime oge niile m hụrụ n'anya.
Jul 30, 2008 na 9: 56 AM
Ndoo na okpukpu abụọ, mana na vidiyo…
Mara: Ha niile bụ osote onye isi ala. Hmm?
Jul 30, 2008 na 1:09 PM
You nwere ike ịlele http://cardsfreebusiness.com. Ọ bụ ezigbo chịkọtara ihe niile kaadị azụmaahịa m meworo.
Nov 11, 2008 na 12:01 AM
Nhọrọ ọzọ bụ ọrụ dị ka TextID – ụzọ ọhụụ ewepụtara n’oge na-adịbeghị anya iji nyere ndị mmadụ aka ịkparịta ụka na ndị ahịa, ndị otu na ndị enyi? TextID na-enye ndị ọrụ ohere ịzụta ederede pụrụ iche? Ngalaba, dị ka aha ha ma ọ bụ azụmaahịa ha na-enye ha ohere ịgafe ozi kọntaktị na ozi ọsọ ọsọ na nkwekọ. Ha nwere ike ịnye ID ha, nlekọta ahịhịa ma ọ bụ Angie dịka ọmụmaatụ, yana ederede nnata ndị akpọrọ 555411. N'ime oge ole na ole, ha ga-anata ederede na ekwentị ha na ozi kọntaktị na ozi ndị otu TextID ahọrọla, nke nwekwara ike ịgụnye pdf faịlụ ma ọ bụ broshuọ.
O doro anya na ọrụ ọhụrụ ahụ nwere ọtụtụ ngwa, site na nke onwe na nke azụmahịa. Ma ndị ezigbo ala na-achọ inweta ọnụahịa na ozi ụlọ n'ime onye nwere ike ịzụta ya mgbe ha na-achọ ụlọ, onye nkuzi hip na-enye ozi oge niile yana nyocha ozi, ụlọ oriri na ọ passingụ restaurantụ na-agafe na ọpụrụiche kwa izu, onye nkwalite ọgbakọ pushing ngwụsị izu, ma ọ bụ onye na-achọ ime ka mmekọrịta mkpakọrịta nwoke na nwanyị dịtụ mfe, NJ Text na-arụ ọrụ dị ukwuu maka ndị ọrụ dị iche iche.
Lelee ya na http://www.textid.com